Faritra arovana -Farafangana: kila forehitra ny 102 ha ao Manombo | NewsMada
Faritra arovana -Farafangana: kila forehitra ny 102 ha ao Manombo
Tamin’ny herinandro lasa teo, may kilan’ny afo ny ao amin’ny faritra arovana Manombo, any Atsimo atsinanana, kaominina Farafangana. Dimy andro taorian’ny nahamay ny ala, vao nanao fanadihadiana sy nanokatra famotorana ny ao Farafangana, nefa tsy ampy 35 km miala ny renivohitry ny faritra ny valan-javaboahary arovana ao Manombo.
Miha Nosy mena hatrany i Madagasikara tamin’ity taona ity, raha ny fitombon’ny ala may any amin’ireo faritra arovana. Vokatr’izany, “Tompondaka eran-tany” i Madagasikara, noho ny fahalotoan’ny rivotra manoatra no ho ny any any New –Dheli (Inde). 102 ha ny ala navela kilan’ny afo ao Manombo, Farafangana, faritra Atsimo Atsinanana. Mirefy 5 000 ha ity faritra arovana ity, tantanin’ny MNP (Madagascar national park). Anisan’ny sompitr’i Madagasikara, miantoka ny famatsiana ambioka hanaovana fambolenkazo, nefa dia izao kila forehitra tsisy noraisina izao ny 102 ha taminy.
Mitahiry ireo biby sy zavamaniry manana ny mampiavaka azy manokana, toy ny fantsinakoholahy na Humbertia Madagascariensis, karazan-kazo tena manana ny mampiavaka azy, ao koa ireo karazana voamboana madinidravy sy boribory ravy, sy ny maro hafa ; ny biby toy ny ny varika mena, sns. Reharehan’ny faritra ireo, satria mampiavaka azy izany fananany izany.
Miantoka ny fidiram-bola
Mampalahelo, na zanakazo iray aza hanoloana ireo may tsisy ao amin’ny Sampandraharaham-paritra momba ny tontolo iainana (DREDD) any Atsimo Atsinanana. “Malahelo izahay zanaky ny faritra ka mitaraina aminareo mpitondra fanjakana mahefa satria tsy araka ny nantenaina, miteraka izao fahavoazana ngezabe eto amin’ny firenena izao….”, hoy izy ireo.
Miangavy ny handraisana fepetra hentitra amin’ izao toe-javatra izao ny any an-toerana Atsimo Atsinanana, anisan’ny tratra aoriana amin’ny fampandrosoana. Mbola potehina indray ny harena voajanahary, isan’ny miantoka ny fampidiram-bola sy ny fampandrosoana ifotony. Miandrandra fiovana goavana ny any an-toerana ka tsy vitan’ny laminasa fampandrosoana ambony latabatra fotsiny izany fa ny fampiharana azy ho fanarenana haingana izao fahavoazana izao.